Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Farmaajo Oo Lagu Jirdilay Magaalada Nairobi. – Calamada.com
Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Farmaajo Oo Lagu Jirdilay Magaalada Nairobi.
calamada May 17, 2018 2 min read
Wararka ka imaanaya dalka Kenya gaar ahaan Magaalada Nairobi ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya ay jir dil xooggan u geysteen mid ka mid ahaa Xildhibaanada Dawaaqiida Kooxda Ridada Somaliya xili uu ku suganaa Magaalada Nairobi.
Xildhibaanka oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdullaahi Siraaji ayaa xiliga la jir dilayay waxa uu watay gaari nooca raaxada ah isaga oo dhexmarayay xaafada Westland ee Magaalada Nayroobi.
Booliska Kenya ayaa sheegay in ay ka shakiyeen in gaariga uu xildhibaankan Murtadka ah watay uu ahaa mid lasoo xaday sidaasi darteedna ay u jir dileen.
Balse ilo xog-ogaal ah oo ku sugan Magaalada Nairobi ayaa kusoo waramaya in Ciidamada booliska Kenyaatiga ah ee jirdilka xoogan u geystay Xildhibaanka ay tiro ahaan gaarayeen ilaa afar sarkaal, isla markaana ay waydiisteen inuu lacago laaluush ah siiyo, kadibna ay garaaceen markii uu amarkooda ka dhega adaygay.
Ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay ka qaateen Xildhibaanka ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya ka qaateen lacag gaareysa laba kun oo doolar oo uu jeebka ku watay.
Xildhinaaka la jir dilay ayaa xilka xubinnimada Golaha Dawaaqiida loo magacaabay bishii Febraayo ee sanadkaan kadib markii uu xilkaasi ka dhintay Walaalkiis oo Wasiir ka ahaa Kooxda Ridada Somaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabaas Cabdullaahi Siraaji , kadib markii askar ka tirsan isla kooxda Ridada Soomaaliya ay ku toogteen afaafka hore ee Madaxtooyada magaalada Muqdisho xilli uu saarnaa gaari nooca raaxada ah oo dabasocday gaari kale oo ay maleeshiyaatka toogtay saarnaayeen.
Arinta jirdilka xildhibaankan ka tirsan murtadiinta Soomaaliya ayaa qayb ka noqonaysa silsilado xadgudubyo ah oo ay inta badan la kulmaan horjoogayaasha Murtadiinta Soomaalida ah ee dabadhilifka u ah saliibiyiinta dalka kusoo duulay.
Dhowr jeer oo hore ayaa masuuliyiin kamid ah kooxda ridada Soomaaliya waxaa ay warbaahinta ka sheegeen inay la kulmeen jirdil iyo ihaano ay u geysteen askar ka tirsan saliibiyiinta Afrikaanka ah ee ku sugan Garoonka diyaarada Muqdisho iyo xerada xalane oo ah fariisinta ugu weyn ee ay ku suganyihiin kuffaarta Afrikaanta iyo saraakiisha reer galbeedka ah
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 01-Ramadaan-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 01-09-1439 Hijri.